This criminal Sit Khwe Gadone, Mon State Myawaddy monk must be called in to investigate for defamation and intimidation. Thai Muslims and Thai Government should take action on all the DKBA rebels and Myanmar Monks entering Thailand | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeThis criminal Sit Khwe Gadone, Mon State Myawaddy monk must be called in to investigate for defamation and intimidation. Thai Muslims and Thai Government should take action on all the DKBA rebels and Myanmar Monks entering Thailand
This criminal Sit Khwe Gadone, Mon State Myawaddy monk must be called in to investigate for defamation and intimidation. Thai Muslims and Thai Government should take action on all the DKBA rebels and Myanmar Monks entering Thailand
March 1, 2017 March 1, 2017 drkokogyi
This criminal Sit Khwe Gadone, Mon State Myawaddy monk must be called in to investigate for defamation and intimidation.
Thai Muslims and Thai Government should take action on all the DKBA rebels and Myanmar Monks entering Thailand
ဒီအခြေခံဥပဒေကို တပ်မတော်က ခွင့်မပြုရင် ဘယ်သူမှ ပြင်လို့မရဘူး
“အခြေခံဥပဒေကာကွယ်တဲ့ တပ်မတော်ကို မဘသခေါင်းဆောင် ပိုင်းက ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်”
မေး။ ။ ဦးဝီရသူရဲ့လူမူကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ဦးကိုနီကိုသတ်လိုက်တဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ရေးသားထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သံဃာတော်တစ်ပါးနေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ပြောရမလား ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းအနေနဲ့ကော ဘယ်လိုများ သဘောရလဲဘုရား။
ဖြေ။ ။ သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အာဘော်ပဲ။ မဘသ အနေနဲ့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ ဒါတွေကို ဘာမှ မဝေဖန်လိုဘူးပေါ့။ ကိုနီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လူတွေကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြစ်မြင်မှာပဲလေ၊ မဟုတ်ဘူးလား၊ ဒီသဘောတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘုန်းကြီးတုိ့က အားလုံးအတွက် ကြေညာစာတမ်း ထုတ်ထားပြီးပြီလေ၊ ကိုနီသေတာကိုလည်း ဒါဟာ သတ္တဝါတစ်ဦးသေသလို ဝမ်းနည်းတာပဲပေါ့။ အားလုံး သေနေကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အသတ်ခံနေကြရတာပဲ မဟုတ်လား။ ဘုရားက မြွေဟောက်တစ်ကောင်ကို ကာလသားတွေ ဝိုင်းရိုက်တာကို ဘုရားက မကြိုက်လို့တားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ပုံစံလေ၊ ဖတ်ဖူးတယ် ဟုတ်။ မည်သူတစ်ဦးဦးကို သတ်တာကမှ ဘုန်းကြီးတို့ အဖွဲ့က မကြိုက်ဘူးလေ။ ဒါ သဘောထား ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြီပဲဟာ။ ဖတ်ရတယ်မဟုတ်လား။
မေး။ ။ အခုက သူ့ရဲ့အာဘော်ဆိုပေမယ့် သံဃာတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ အဲဒီလိုမျိုး ပရိသတ်တွေကို အတိအလင်း ချပြဖို့သင့်မသင့် ဘယ်လိုမြင်လဲဘုရား။
ဖြေ။ ။ ယိုးဒယားကို ဒကာ အခုတလောမှာ ကြည့်လိုက်။ ယိုးဒယားမှာ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ လုပ်နေပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ယိုးဒယားက အာဏာသိမ်းတာ အများဆုံးပဲ၊ သ်ိမ်းပြီးရင်လည်း မူဝါဒက နဂိုအတိုင်းပဲ သွားနေတဲ့အခါကျတော့ အမေရိကန်က နှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ ဒီအတိုင်း မနေနေဘူးလား။ ဗမာပြည်က အာဏာ သ်ိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အမေရိကန်က သူ့မူဝါဒအတိုင်းမလိုက်ဘဲနဲ့ ဦးနေဝင်းတို့ ဆိုရှယ်လစ်ဘက်ကို လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ အမေရိကန်က ကလန်တယ်လေ။ အကယ်၍ ဦးနေဝင်းသာ အမေရိကန်နဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းနေမယ် တည့်နေတယ် ဆိုရင် ဒါဟာ သူတို့မြှောက်စားနေမှာပဲ။ ပါကစ္စတန်မှာလည်း အာဏာသိမ်းတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကို သူ့မူဝါဒအတိုင်း လုပ်တဲ့အခါကျတော့ လက်တွဲပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေတယ်။ သူ့မူဝါဒအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူသိမ်းသိမ်း သူကြိုက်တယ်။ ကနေ့ ယိုးဒယားရဲ့လွှတ်တော်မှာ မွတ်စလင်တွေ ရာနဲ့ချီပြီးတော့ ရောက်သွားပြီ၊ ကြားဖူးတယ်နော်။ အခု ယိုးဒယားက မက္ကာသွားတဲ့ ကုလားတွေကို အစိုးရရဲ့ခရီးစရိတ် ထုတ်ပေးရတဲ့အဖြစ် ရောက်သွားပြီ။ ပြီးတော့ ယိုးဒယားအခြေအနေမှာ ဓမ္မာကာယဂိုဏ်းဆိုတာ ဂိုဏ်းနှစ်ဂိုဏ်းထဲမှာ အဓိက ဂိုဏ်းကို အစိုးရက ဖြိုခွင်းနေတာရော ကြားလား။ ကြားတယ်မလား။ ဒီလိုစနေပြီပေါ့။ ဗမာပြည်မှာ အဲဒီအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက် ရှေးကတည်းက ဦးနေဝင်းတို့ လက်ထက်ကတည်းက ဘာသာခြားတွေကို ရာထူးကြီးကြီး မပေးခဲ့ဘူး။ ဗိုလ်မှူးချုပ်အေဘယ် တစ်ယောက်ပဲ အရည်အချင်းရှိလို့ နဂိုကတည်းက ဒီရာထူးနဲ့ပဲ နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးပါတဲ့နေရာမှာ မထားဘဲနဲ့ နိုင်ငံခြားဘက်မှာပဲ ထားသွားတယ်။ နောက်ထပ် နောက်ထပ် ဘယ်သူမှ ဗိုလ်မှူးကြီး မဖြစ်လာရဘူး။ ကိုနီက ခြံစည်းရိုးဆိုတဲ့ဥပဒေကို တစ်ချောင်းချင်း၊ တစ်ချောင်းချင်း ဖယ်ရှားနေတယ်။ တဖြည်းဖြည်း သူ့လူတွေကို ဝင်လာနိုင်အောင် လုပ်နေတယ်။ ဒါကို ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မြင်အောင် ကြည့်တတ်ကြဖို့လိုတယ်။ တို့ ဧည့်စာရင်းစစ်တဲ့ဟာကို ပထမဆုံး ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ ဧည့်စာရင်း တိုင်တဲ့နေရာမှာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂ဝ၊ ၂၅ လောက်တုန်းက တစ်ကျပ်လား ပေးရတယ်၊ တို့ရွာမှာ။ နောက်ပိုင်း ဘယ်လောက်ပေးရလဲ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေက ပေးရရင် မကြိုက်ဘူးလေ။ လူတွေက ဧည့်စာရင်းကိစ္စရှုပ်တယ် ဆိုပြီးတော့၊ ဒီအကွက်ကို သူတို့က လူထုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ။ အကြောင်းပြတာ။ ဒါဖျက်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း ဒီခြံစည်းရိုးတစ်ချောင်း ကျိုးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း သူ့မွတ်စလင်ကုလားတွေ တန်းစီပြီးတော့ ဝင်လာတာ မတွေ့ဘူးလား။ ဒါက တိုင်းပြည် အလားအလာအတွက် ဒီအတိုင်းသွားရင် မကောင်းဘူးဆိုတာ မြင်တယ်။ ဒီလောက်နဲ့တော့ မဖြစ်သေးဘူး။ တဖြည်းဖြည်း၊ တဖြည်းဖြည်းချင်း လာမယ်။ အဲဒါတိုင်းပြည် ချောက်ကျမယ့် သဘောပဲ။
ဖြေ။ ။ လောလောဆယ်ဆယ် ပြင်ဆင်ဖို့မလိုသေးဘူး။ ပြင်ဆင်ဖို့ ဆိုတာလည်း မရသေးဘူး။ မရသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြင်မယ်လို့ ပြောနေတာကလည်း အမုန်းပွားတာပဲ အဖတ်တင်မယ်၊ ငါလည်း စိတ်ပူပြီးတော့ ပြောဖူးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ယောက် ပြောတယ်၊ ဆရာတော် ဘာမှမပူပါနဲ့၊ တပ်မတော်သည် အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်ရမည်လို့ စာကြောင်းပါတယ်။ တလောက ဆောင်းပါးမှာဖတ်လိုက်ရတာက အခြေခံဥပဒေ ထိန်းသိမ်းဖို့ရန် တပ်မတော်သည် အဓိက တာဝန်ရှိသည်။ ဒီလိုစာသားနဲ့ ရေးထားတာရှိတယ်။ ဟို ဗိုလ်ချုပ်ပြောတာကတော့ ဗမာလိုပြောချလိုက်တာပဲလေ။ တပ်မတော်သည် အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်ရမည်။ ဒီအခြေခံဥပဒေကို တပ်မတော်က ခွင့်မပြုရင် ဘယ်သူမှ ပြင်လို့မရဘူး။ ပြင်ချင်ရင် တပ်မတော်နဲ့ သင့်လျော်အောင်ပေါင်း၊ ညှိ။ ဟုတ်ပြီလား။ အဲဒီလိုကာကွယ်ရတဲ့ အပိုင်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဟိုကောင်တွေက ဥပဒေဆိုတဲ့ ခြံစည်းရိုးကို တစ်ချောင်းချင်း၊ တစ်ချောင်းချင်း၊ ဖြည်းဖြည်း မသိမသာဖြုတ်။ သူတို့က ဘာမှနားမလည်တဲ့ လူထုကို ဘာမဟုတ်တာလေးတစ်ခုပေး၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ တစ်ကျပ်၊ ငါးမူး သက်သာတာကို။ တကယ် သူ့လူ သူသွင်းချင်တာကိုကတော့ မြှုပ်ထားတယ်။ ဒီ့အပြင်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေ ရှိသေးတယ်။ အဲဒါ၊ တိုင်းပြည် ချောက်ကျသွားမှာပဲ။ ချောက်တော့ အကျမခံဘူး။ ပြောလို့မရရင်တော့ တို့ မျိုးချစ်လူတွေက၊ ဘုန်းကြီးတွေကရော လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ လက်မခံနိုင်ရင် တိုင်းပြည်ပွက်မယ်။ တိုင်းပြည်ပွက်လို့ အစိုးရက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ဖြစ်ရင် တပ်က အာဏာသိမ်းမယ်၊ ဒီလမ်းစဉ်ပဲရှိတာ။ အဲဒီလိုဆိုရင် တို့ဒီမိုကရေစီ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ငါတို့က အဲဒီ ဒီိမိုကရေစီကို ပေးမပျက်စေချင်လို့။ ဒီကိုနီ မွှေနေပုံက တစ်နေ့တော့ ဒုက္ခတော့ ပေးတော့မှာပဲ လို့၊ ဒီလိုတော့ သိတယ်လေ။ အခုသည်ပင်လျှင် တပ်မတော်က ငါတို့ အတွင်းကျကျသိထားတဲ့ အသိတစ်ခုက၊ မှားရင်လည်းမှားမယ်၊ မှန်ရင်လည်း မှန်မယ်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လောက် တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် သူလုပ်နိုင်သလဲ။ သူ့လုပ်ဆောင်ချက်က တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက်တောင် အန္တရာယ် များသွားသလဲ။ ဒါကို တပ်မတော်က စောင့်ကြည့်နေတယ်၊ လူထုက သူ့ကို တအား ယုံကြည်နေတာကို။ ကနေ့အထိတော့ တိုင်းပြည် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်လောက်အောင် မဖြစ်သေးဘူး။ မဖြစ်သေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီအတိုင်ပင်ခံ ဆိုင်ရာ၊ ဒီ ကိုနီတို့ လုပ်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့၊ အခြေခံဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ အခါကျတော့၊ တပ်မတော်က တောက်တစ်ချက် ခတ်သွားတယ်၊ သည်းခံလိုက်တယ်၊ မလုပ်သေးဘူး၊ စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ဒီလိုဟာ များနေရင် ပါးစပ်က တောက်ခတ်ရုံတင်မကတော့ဘဲ လက်ပါလာမယ်။ ဒါတွေကို သတိပြုမိကြရဲ့လား ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်ဘူးလေ။ ငါတို့ကတော့ စိတ်ပူနေတယ်။
မေး။ ။ ဒီလုပ်ကြံမှုမှာ အငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ တပ်မတော် အရာရှိကြီးဟောင်းတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ယူဆသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို ယူဆချက်တွေကိုကော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါကကွာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလိုပဲ ထင်ရှားနေတာပဲ။ ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရင်မြင်တယ်လေ။ ဒီမိုကရေစီကို မင်းတို့၊ ငါတို့ ပြည်သူတွေက အော်ဟစ် တိုက်ခိုက်လို့ ရလာတာမှ မဟုတ်တာ။ ဟိုတုန်းက ငါတို့ အော်ဟစ် တိုက်ခိုက်လို့ သေတာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်လေ။ ရရဲ့လား၊ မရဘူးနော်။ နောက်ဆုံး အခြေခံ ၇ ချက် ဆိုပြီး ယိုးဒယားကပြောလို့ ဦးခင်ညွန့်တို့က ဘာမြေပုံဆိုလဲ အဲဒါတွေနဲ့ အခြေခံတွေဆွဲပြီး ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး လက်ထက်မှာလေ၊ ဆွဲပြီးလို့ အားလုံးလမ်းခင်းပြီးတဲ့အခါကျမှ ဒီမိုကရေစီ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကို ချပေးခဲ့တယ်လေ။ ချပေးလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အဖွဲ့က ပထမအသုတ်မှာ ဝင်မပြိုင်ဘူးလေ။ အဲဒါ ဘယ်သူက မပြိုင်ခိုင်းလို့ မဝင်သလဲဆိုတာ ဒကာသိလား။ ကိုနီပါရင် လှေမှောက်တယ် ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး၊ ဒကာဖတ်လိုက်ပါ၊ အဲဒီမှာ ၆ ချက်တွေ့လိမ့်မယ်၊ နောက်ဆုံးတစ်ချက် ငါပြောမယ်၊ အဲဒီမှာ ကိုနီက အကြံဉာဏ်ပေးတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရင်လည်း ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ်ဘူး၊ အခြေခံဥပဒေ မပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ နိုင်တော့နိုင်မယ်၊ သမ္မတလုပ်လို့ မရဘူး။ အခြေခံဥပဒေကို အစကနေပြန်ရေးမယ် ဆိုတဲ့ အသံကော မကြားဘူးလား။ အဲ့ဒီမှာ ဒေါ်စုကို သူက ပြောတဲ့အခါမှာ ဒေါ်စုက သူ့အပေါ်မှာ သံသယဖြစ်တယ်လို့ တို့ကြားတယ်။ သူက မလုပ်နဲ့၊ လုပ်ရင် တပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ်လို့ ပြောတယ် ဆိုလားပဲ။ ဦးကိုနီကိုလည်း နိုင်ငံခြား OIC ကနေ ငွေကြေးတွေ ထောက်ပံ့ပေးပြီး မင်းဒါတွေ မလုပ်သေးဘူးလားလို့ ဖိအားတွေ ပေးနေတယ်။ သူလုပ်ပြန်တော့လည်း ဒေါ်စုတို့က လက်မခံပြန်ဘူး။ မလုပ်သေးဘူး။ ဆိုင်းထားတယ်ပေါ့။ သူ့ကို တစ်ဖက်ကလည်း ငွေအားနဲ့ ဖိအားပေး အကျပ်ကိုင်နေတော့ သူလုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကို စာအုပ်ရိုက်ပြီး ဝေလိုက်တယ်လေ။ အဲဒီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒေါပွတယ်ဆိုတာကြားတယ်။ ဒေါ်စုက သူနဲ့ ၃ လလောက် တန်းသွားပြီး အတွေ့မခံဘူးလို့လည်း ကြားတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးနော်၊ ကြားတာ။ အဲ့ဒီရဲ့အရှိန်နဲ့ အခုလို အသတ်ခံရတယ် ဆိုတော့ ဘယ်လိုတွေ၊ ဘယ်ဝါတွေတော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ သတ်တာမှာ လူတစ်ယောက်သတ်တာ ဘယ်နေရာသတ်သတ် ရတာပဲ။ ဒီလောက် လက်နက်တွေ ပေါနေတာ။ လူကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့ကို သတ်လို့ရတာပဲ။ မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်း သတ်လို့ရတာပဲ။ အားလုံးရရက်သားနဲ့ လူမြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာသိဖြစ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာ ဗြောင်ကြီး လုပ်ပစ်လိုက်တာက တိုင်းပြည်က ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကို ဉာဏ်မျက်စိ၊ ဉာဏ်နားနဲ့ နားထောင်လိုက်ရင် သိနိုင်တယ်။
မေး။ ။ ဒါဟာ ပြည်သူ ထိတ်လန့်စေအောင် ခြိမ်းချောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ ဘုန်းဘုန်းတို့ ယူဆတယ်ပေါ့။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒီဟာက နည်းနည်းတော့ ပါးတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာကို သူချယ်လှယ်နေတာကို မကြိုက်တဲ့သူ အများကြီး ရှိတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကို တစ်ဦးတည်း ကြိုးကိုင်ပြီး မွှေနေတယ်ဆိုတော့။ သူတို့ထဲမှာလည်း တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချောက်ကျသွားမှာ ကြောက်တဲ့သူ အများကြီးရှိတယ်လေ။ ဗြောင်မပြောရဲတဲ့သူတွေလေ၊ ဗြောင်ပြောရင် ဘေးရောက်သွားမယ်လေ။ ဒီလိုတွေရော မရှိနိုင်ဘူးလား၊ အများကြီးပဲ။ သိမ်မွေ့တယ်လေ။ အဲ့ဒီလိုတွေ အများကြီး အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ရင်တော့ ဒီလိုရှင်းပစ်မယ်ဆိုတာတွေ လာလိမ့်ဦးမယ်။ နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေ ဘာထပ်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာတော့ မပြောနိုင်ဘူး။
မေး။ ။ နောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ် ဆိုတော့ NLD ရဲ့ ဥပဒေအကြံပေးတွေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှာလည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မရှိဘူး။ ပါတီရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေမှာလည်း မပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ပါတီထဲက ကြိုးစားနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ယူဆသလား။
ဖြေ။ ။ အခြေခံဥပဒေကို အဲ့ဒီလို့ပဲ လုပ်လာပြီးတော့ ကိုးရိုးကားယားပေါ့။ ဥပမာ- ဦးကိုနီလိုပဲ မွှေလာမယ့်သူ ရှိလာရင်တော့ သတ်မယ့်လူလည်း ပေါ်လာဦးမှာပဲ။ တိုင်းပြည် ထိတ်လန့်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်းကြမှာပဲ။ တိုင်းပြည် ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုရင်။
မေး။ ။ အခုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုင်တွယ်နေတာ သိမ်မွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်မှာ သူကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြောမယ်၊ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေကလည်း အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြောမယ်ဆိုရင် သူတို့လည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့။
ဖြေ။ ။ ကိုးရိုးကားယားဖြစ်မယ့်အနေအထား ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ် ရှိနိုင်တာချည်းပဲလေ။ အားလုံး အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာပေါ့။ တို့လည်း အန္တရာယ်ရှိတာပဲ။ သွားရင် အစောင့်အရှောက်နဲ့သွားနေရတာပဲ။ ကုလားရဲ့အန္တရာယ်ပေါ့။ အန္တရာယ်ကြီးတာနဲ့ငယ်တာပဲ ကွာတာ။ အဲဒါကြောင့် ငါတို့က ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ မပေးဖြစ်စေချင်တာ အမှန်ပဲ။ တို့အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လုပ်ကြံမှုကိုမှ အားမပေးဘူးလေ။ အားလုံး အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရောက်အောင်ပေါ့။ အခုက ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘဲ အစမှာပဲ ချာလပတ်လည်နေတယ်။ တို့ကတော့ တကယ် တိုင်းပြည် ကောင်းစေချင်တာ။ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ခင်ကတည်းက ငါတို့ညီလာခံမှာ ပြောခဲ့တာပဲ၊ တွဲပြီးတော့ တကယ် အုပ်ချုပ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်က တကယ်တော်တဲ့သူနဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ၃ ပုံ ၂ ပုံ ပါဝင်ပြီး တွဲအုပ်ချုပ်သွားရင်၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဘေးဖယ်ဖယ်သွားရင် ကိုယ်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးတတ်သွားမယ်။ အခုက အုပ်ချုပ်ရေး မတက်တဲ့သူက အစိုးရဖြစ်နေတယ်။
← စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ မိဖုရားရှိရာ ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူး အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။ မလ္လိကာ မိဖုရား ငိုကျွေးဖို့ မတွေးခဲ့ဘူး အကြောင်းကြားလာ ပေစာကို ရင်မှာဝှက်လို့ ဆွမ်းချက်တာတောင် မပျက်ခဲ့ဘူးလေ
2 thoughts on “This criminal Sit Khwe Gadone, Mon State Myawaddy monk must be called in to investigate for defamation and intimidation. Thai Muslims and Thai Government should take action on all the DKBA rebels and Myanmar Monks entering Thailand”
ခါတိုင်းရေးနေကျ ဆွနေတာ၊ သတိကြီးကြီးထားပါ။ ကိုယ်တွေဘက်က မလွန်ပါစေနဲ့ မပြောပဲ ဆွပေးတဲ့နောက်ကို လိုက်ပါဆိုတော့ ထူးဆန်းနေမလားမသိ။
၁- မဘသ ဦးဆောင် ဆရာတော် တပါးကနေ ဦးကိုနီ ကိစ္စမှာ လူသတ်သမားတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေ သတိထား၊ ကြည်လင်းတွေ ထွက်လာမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာဟာ အကွက်ကျကျ ဆွပေးတာပဲ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ထဲရေးရဲ့ ဘ၀င်မကျဖွယ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီး ပြည်သူတွေ မကျေနပ်မှုတွေ မြင့်တက်လာချိန်မှာ တမင် ဆွတာ ဖြစ်တယ်။
၂- ဘာကြောင့် ဆွသလဲ။ NLD အစိုးရရဲ့ ပြည်ထဲရေးအပေါ်မှာ သြဇာသက်ရောက်ဟန် မရှိမှုကြောင့် ပြည်သူတွေ အထင်လွဲမှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ချိန်မှာ ထပ်တိုးပြီး ဆွလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ပိုပြီး ဆိုးတာက ပြည်သူတွေ ဆူဆူပူပူ ဖြစ်လာရင်လည်း အမြတ်ပဲ ဆိုပြီး ဆွလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည်အတွက် စေတနာကောင်းတဲ့ ဦးကိုနီမိသားစုကို စိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်းစေအောင် ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိပါးပြီး ဆွလိုက်တာ ဖြစ်တယ်။
၃- ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဆရာတော် သတိမထားမိတာဟာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောသွားတဲ့ ဘုန်းကြီးက လူသတ်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ လောဂျစ်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေတာပါပဲ။ ဒီအပြင် ဘုရားအလောင်း၊ ရဲဘော်သုံးကျိတ်တို့နဲ့ ယှဉ်ပြီး လူသတ်တာ ထောက်ခံတယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ ပို့စ်တွေပါ တင်နေပါတယ်။ ဒီပို့စ်တွေဟာ ဆွနေတာ ဆိုပေမယ့် လက်ရှိ ရာဇ၀တ်မှုကို အားပေးရာရောက်နေတဲ့အတွက် တရားစွဲဆိုလို့ ရနိုင်တဲ့ အမှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
၄- အခုလို ဆွနေတာသည် လွှတ်တော်အမတ်များရဲ့ ပြည်သူအသံကို နားစွင့်မှုကိုပါ သရော်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တရားလက်လွတ် အမုန်းစကားတွေ ဟောပြောနေတာ၊ အမုန်းတရားတွေကို ဖြန့်ဝေနေတာ သက်သေသက္ကယာတွေ ရှိနေပါရဲ့နဲ့ (ကိုဖြိုးမင်းသိန်းမှတပါး) ကျန်အမတ်တွေ နှုတ်ဆိတ်မနေသင့်တော့ပါဘူး။ ပြည်ထဲရေးကို မထိန်းကျောင်းပဲ အမနေသင့်တော့ပါဘူး။ (အမတ်တွေရဲ့ မေးခွန်းထုတ်မှုအတွက် ဘယ်တရားစွဲဆိုမှုမှ လုပ်မရတာသေချာရဲ့နဲ့တောင်) ပြည်သူ့အမတ်တွေ နှုတ်ဆိတ်နေရင် ပြည်သူတွေ ဘယ်လို အားကိုးရတော့မှာလဲ။ ဒါကြောင့် အမတ်တွေ ငြိမ်မနေပဲ ဒီ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က အမုန်းတရား ဖြန့်ဝေမှုကို မေးခွန်းထုတ်ကြပါ။ ဆိုင်ဘာရဲတွေကို မေးခွန်းထုတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
၅- ပြည်သူတွေလည်း အသံထွက်ပါ။ မဆဲပါနဲ့။ အမုန်းကို အမုန်းနဲ့ မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ ဗုဒ္ဓဘုရား၇ှင်ရဲ့ အရေတော်ခြုံထားတဲ့ သံဃာတပါးအနေနဲ့ ဒီလို ပြောတာ တရားတော်နဲ့ မညီကြောင်း၊ ဓမ္မနဲ့ မညီကြောင်း အသံထွက်ပါ။ ပြည်သူတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ၀ိုင်းတွန်းရင် တိုင်းပြည် အဖျက်အမှောက်တွေ လျော့ပါးသွားနိုင်ကြောင်းပါ ခင်ဗျား
41 mins · Kuala Lumpur ·
DKBA တပ် တခုလုံးက ဦးကိုနီကို သတ်ချင်နေတာ…..ဆိုဘဲ
ဦးကိုနီကို ပစ်ခဲ့တဲ့ သေနတ်ကလဲ DKBA က ရောင်းပေးလိုက်
ကရင်ပြည်နယ်မှာ ခရစ်စယန်ဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ
တွေရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေကို နှောက်ရှက်ဖျက်ဆီး ဒုက္ခ
ပေးနေတာလဲ DKBA ဘဲ
ထားတာလဲ DKBA တဖွဲ့ဘဲရှိတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက စစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းရှင်လူ
တွေနဲ့ ဘာသာခြားတွေအတွက်တင် အန္တရာယ်ရှိတာမဟုတ်ပါ
အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်လဲ အန္တရာယ်ကြီးလှပါတယ်